I-Wholesale Anywhere I-Table Tennis Sets ene-Retractable Net Manufacture kanye ne-Factory |XGEAR
I-XGEAR noma yikuphi Izinsiza ze-Ping Pong okukhona zihlanganisa okuthunyelwe kwenetha okuhoxiswayo, izigwedlo ze-ping pong ezi-2, amabhola ama-pcs angu-3, ​​wonke agcinwe ngokuvikelekile esikhwameni esingeziwe sokudonsa, ngakho-ke kulula ukukuphatha lapho uphuma.Le sethi yethenisi yetafula ephathekayo inganamathisela kunoma iyiphi indawo yetafula.Vele uwathathe uhambe nawo futhi ujabulele.
Inethi yethu iqinile futhi iyi-premium, ama-paddles aqinile futhi abheke irabha eqinile, amabhola ngeke aqhekeke noma aphihlizwe.Kulungele umzuzu wenjabulo ukuthi ungaba nomdlalo osheshayo wokuzijabulisa okukhulu noma ngabe usekhaya, ihhovisi, ikilasi nohambo lokukhempa ngaphandle kobunzima bokufakwa kunoma yiliphi ithebula.
● UHLU LOKUPAKA:Isethi yethenisi yetafula ye-XGEAR iza iphelele nokuthunyelwe kwenetha okuhoxiswayo, ama-pcs angu-3 we-ping pong (ububanzi obu-4mm) kanye namapheya anesikhwama esidonsayo sokugcina le sethi ye-ping pong kalula, ukuze uhlale ugcina zonke izingxenye zihlangene.
● I-mesh engasindi esiyisebenzisayo kokuthunyelwe okuhoxiswayo iqinile, ingakwazi ukumelana nanoma yimiphi imithelela.Isethi ye-ping pong ehoxiswayo ngokucindezela kwe-clamp eyakhelwe ngaphakathi entwasahlobo, ilungele ukuboshelwa kunoma iyiphi indawo yetafula ( ububanzi bufika ku-75'' futhi ukujiya kungu-2'').
● Izigwedlo zenziwe ngokhuni oluqinile olunanyathiselwe ngokuqinile ngobuso benjoloba obuphambili, obunganikeza ukuqina okuhle kakhulu, isivinini esingcono nokulawula ukuzungeza lapho ushaya ibhola le-ping pong ngaleli gwebu.Amabhola ethenisi etafula e-ABS ngeke aqhekeke noma ahlakazeke lapho edlala.
Indaba Eyinhloko I-ABS
Isici Kulula ukuyifaka, ingavikelwa ngokumangalisayo ngaphandle kokulimaza indawo yetafula.
Uhlu lwezinsiza Kubandakanya okuthunyelwe kwenetha okuhoxiswayo, amaphini e-ping pong angu-2, amabhola angu-3pcs (ububanzi obu-4mm) nesikhwama esengeziwe.
Ubukhulu bento (usayizi webhokisi langaphakathi) L10.55" x W6.3" x H3.86"
Isisindo sento 0.9KG
Usayizi webhokisi L19.1" x W1.83" x H19.7" (15pcs/ibhokisi)
IkhathoniGros Isisindo 14.5KG
● 1. Iposi yethu yenetha ehoxiswayo ifakwa kalula ngesiphethu esakhelwe ngaphakathi.Vele ucindezele i-trigger, khona-ke inetha ingaboshelwa ngokuqinile.
● 2. Kungakhathaliseki ukuthi itafula linjani, inetha lethu lingavikelwa ngokumangalisayo ngaphandle kokulimaza indawo yetafula (Ubude benetha bungafika ku-75", ubukhulu betafula bufika ku-2").
● 3. Dlala noma nini, noma kuphi, noma yiliphi ithebula!
I-XGEAR Table Tennis Set iyaphatheka nesikhwama esidonsayo esifaka zonke izesekeli eziku (okuthunyelwe kwenetha okunwebekayo, ama-3 ama-pcs bouncy ping pong, ama-paddles angu-2).Noma yiziphi izikhathi ezijabulisayo zingadalwa kanye namalungu omndeni, abangani, ofunda nabo, osebenza nabo noma abantu ongabazi abahlangatshezwe ngenhlanhla.Noma ngabe usekhaya, indawo yokuzivocavoca, noma usohambeni, uhambo lokukhempa, amapikiniki, ungaphakathi noma ungaphandle, kuyisinqumo sakho esibalulekile.
Okwedlule: I-Deluxe Foldable Low Back Boat Seat
Olandelayo: Marine-Grade 600D 3 Bow Bimini Top Cover enosayizi Ohlukile Wezikebhe